နေအနီးမှာ လောင်စာဖြည့်နေတဲ့ ဂြိုလ်သားတွေရဲ့ အာကာသယာဉ်များ တွေ့ ရှိ – ရှအေလငျး
You Tube မှာကြည့်ရှု့သူ ၁၃ သိန်းလောက်ရှိ တဲ့ ဒီဗီဒီယိုက နေအနီးအနားမှာ အာကာသ ယာဉ်တွေ့ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒီ ဗီဒီယိုက ဆန်းကြယ်ဖွယ် အရာဝတ္ထုတစ်ခု နေနားမှာ လောင်စာဖြည့်နေပုံကို ဖော်ပြနေ တာပါ။
ဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗီဒီယိုတွေက ဒီအရာဟာ နေမှ စွမ်းအင်နဲ့ လောင်စာပြန်ဖြည့်နေကြောင်း သုတေသီတွေနဲ့ ဂြိုဟ်သား ရှာဖွေသူတွေကိုပြ သခဲ့ပါတယ်။ မယုံသူတွေကတော့ ဒီ ဗီဒီယိုဟာ ဂြိုဟ်သားတွေရှိကြောင်း ဘာမှ အကူအညီမ
Comment တွေအရတော့ ဒီအရာဟာ အာကာသယာဉ်မဟုတ်ရင်တောင် လုံးဝထူး ဆန်းနေပါတယ်။ဒါဟာ ကြယ်တွေကို စားသုံး နေတဲ့ အကောင်ကြီးဖြစ်နိုင်သလို့ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်အပြင် နေအဖွဲ့ အစည်းကိုပါ ပျက်စီး အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ ယုံကြည်ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ဒီလို အကောင်မျိုးတွေ စကြဝဠာ ထဲ မှာ ထပ်ရှိနိုင်ပါသေးတယ် လို့လည်း ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
အရင်ကတည်းက နေ အနားမှာ ထူးဆန်းတဲ့အ ရာတွေ နေ အနီးနားမှာ တွေ့ဖူးနေကြပါ။ဒီဟာ တွေလေ့လာသူတွေကတော့ နေဟာ ဂိတ်တစ် ခု ဖြစ်နိုင်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့ ယာဉ်တွေ ဆိုက်ကပ် နေတယ်လို့လည်း ပြောကြားကြပါတယ်။ အဲ့အရာတွေထဲမှာ UFO ပုံစံ သုံးလေးမျိုးလောက်လည်းပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရ ပါတယ်။
မယုံသူတွေကတော့ ဂြိုဟ်သားတွေဟာ မရှိနိုင် သလို ဒါဟာ ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ အမှားဖြစ်နိုင်ပြီးနေ ဟာလည်း ကြီးမားတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ရုံ မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။အောက်ကပုံကတော့ နေ နဲ့ အာကာသယာဉ်ကြီးတို့ပါပဲ။တစ်ချို့က ဂြိုဟ်သားတွေဟာ တကယ်ရှိပြီး ပုန်း နေကြတယ်လို့ ယူဆကြပြီး တစ်ချို့ကတော့ ဒီ ကိစ္စ ဖြေရှင်းဖို့ အခြား ရှင်းပြချက်တွေလိုသေး ကြောင်းထောက်ပြပါတယ်။
တစ်ယောက်ကတော့ ဒီယာဉ်ဟာ ကမ္ဘာ. ထက် ကြီးပါတယ်။ဒါကို ဉာဏ်ရည်မြင့် မျိုးစိတ်တွေသာ ဆောက်နိုင်ပြီး နှစ် သန်းပေါင်းများစွာထဲက ရှိလာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အခြားသူတွေကတော့ ဂြိုဟ်သားတွေသာ ရိုင်းခဲ့ ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘေးရှိနိုင် ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကို ရပ် တန့်ဖို့လည်းခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ သူတို့ လောင်စာုဖြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။နေကို ဖြတ်သန်း ခရီးသွားနေတာပါတဲ့။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ မလေ့ လာနိုင်သေးပါဘူးတဲ့။ အချို့ကတော့ သူတို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူဖို့ဖြစ်နိုင် ကြောင်း ထင်မြင်ချက် ပေးသွားပြီး ကျွန်တော် တို့ဘဝဖြစ်တည်မှုကို လေးစားမှာပါတဲ့။
ဒီအရာက လူအများစုနဲ့ အကျွမ်းတဝင်မဟုတ်ပါ ဘူး။သိပ္ပံပညာရှင်တွေသတိပြုမိတဲ့ တစ်ခုခုဖြစ် နေနိုင်ပါတယ်။ဒါက CMEs နဲ့လည်း ပတ်သက် နေနိုင်ပါတယ်။လေ့လာမှုတွေအရ ဒါဟာအာကာသယာဉ် မဟုတ်ပါဘူး။ နေ ပတ်လည်
မှာ ထူးဆန်းတာများစွာရှိနေပြီး သိပ္ပံပညာဟာအဲ့ အရာတွေကိုလိုက်မီဖို့ အတော်ကြိုးစားရဦးမှာပါ။
You Tube မှာကွညျ့ရှု့သူ ၁၃ သိနျးလောကျရှိ တဲ့ ဒီဗီဒီယိုက နအေနီးအနားမှာ အာကာသ ယာဉျတှရှေိ့ကွောငျး ဖျောပွထားတာပါ။ ဒီ ဗီဒီယိုက ဆနျးကွယျဖှယျ အရာဝတ်ထုတဈခု နနေားမှာ လောငျစာဖွညျ့နပေုံကို ဖျောပွနေ တာပါ။
ဒီစိတျဝငျစားဖှယျဗီဒီယိုတှကေ ဒီအရာဟာ နမှေ စှမျးအငျနဲ့ လောငျစာပွနျဖွညျ့နကွေောငျး သုတသေီတှနေဲ့ ဂွိုဟျသား ရှာဖှသေူတှကေိုပွ သခဲ့ပါတယျ။ မယုံသူတှကေတော့ ဒီ ဗီဒီယိုဟာ ဂွိုဟျသားတှရှေိကွောငျး ဘာမှ အကူအညီမ
Comment တှအေရတော့ ဒီအရာဟာ အာကာသယာဉျမဟုတျရငျတောငျ လုံးဝထူး ဆနျးနပေါတယျ။ဒါဟာ ကွယျတှကေို စားသုံး နတေဲ့ အကောငျကွီးဖွဈနိုငျသလို့ ကြှနျတျောတို့ ကမ်ဘာဂွိုဟျအပွငျ နအေဖှဲ့ အစညျးကိုပါ ပကျြစီး အောငျလုပျနိုငျပါတယျလို့ ယုံကွညျကွသူတှေ ရှိပါတယျ။ဒီလို အကောငျမြိုးတှေ စကွဝဠာ ထဲ မှာ ထပျရှိနိုငျပါသေးတယျ လို့လညျး ယုံကွညျနကွေပါတယျ။
အရငျကတညျးက နေ အနားမှာ ထူးဆနျးတဲ့အ ရာတှေ နေ အနီးနားမှာ တှဖေူ့းနကွေပါ။ဒီဟာ တှလေလေ့ာသူတှကေတော့ နဟော ဂိတျတဈ ခု ဖွဈနိုငျပွီး ထူးဆနျးတဲ့ ယာဉျတှေ ဆိုကျကပျ နတေယျလို့လညျး ပွောကွားကွပါတယျ။ အဲ့အရာတှထေဲမှာ UFO ပုံစံ သုံးလေးမြိုးလောကျလညျးပါဝငျကွောငျးတှရေ့ ပါတယျ။
မယုံသူတှကေတော့ ဂွိုဟျသားတှဟော မရှိနိုငျ သလို ဒါဟာ ဓာတျပုံဆိုငျရာ အမှားဖွဈနိုငျပွီးနေ ဟာလညျး ကွီးမားတဲ့ ဓာတျငှရေုံ့ မဟုတျကွောငျး ပွောကွပါတယျ။အောကျကပုံကတော့ နေ နဲ့ အာကာသယာဉျကွီးတို့ပါပဲ။တဈခြို့က ဂွိုဟျသားတှဟော တကယျရှိပွီး ပုနျး နကွေတယျလို့ ယူဆကွပွီး တဈခြို့ကတော့ ဒီ ကိစ်စ ဖွရှေငျးဖို့ အခွား ရှငျးပွခကျြတှလေိုသေး ကွောငျးထောကျပွပါတယျ။
တဈယောကျကတော့ ဒီယာဉျဟာ ကမ်ဘာ. ထကျ ကွီးပါတယျ။ဒါကို ဉာဏျရညျမွငျ့ မြိုးစိတျတှသော ဆောကျနိုငျပွီး နှဈ သနျးပေါငျးမြားစှာထဲက ရှိလာတာဖွဈနိုငျပါတယျတဲ့။ အခွားသူတှကေတော့ ဂွိုဟျသားတှသော ရိုငျးခဲ့ ရငျတော့ ကြှနျတျောတို့အတှကျ ဘေးရှိနိုငျ ကွောငျး ထောကျပွခဲ့ကွပါတယျ။သူတို့ကို ရပျ တနျ့ဖို့လညျးခကျခဲလာနိုငျပါတယျ။
နောကျတဈယောကျကတော့ သူတို့ လောငျစာုဖွညျ့နတောမဟုတျပါဘူးတဲ့။နကေို ဖွတျသနျး ခရီးသှားနတောပါတဲ့။ဒါကိုကြှနျတျောတို့ မလေ့ လာနိုငျသေးပါဘူးတဲ့။ အခြို့ကတော့ သူတို့ဟာ ငွိမျးခမျြးရေး ယူဖို့ဖွဈနိုငျ ကွောငျး ထငျမွငျခကျြ ပေးသှားပွီး ကြှနျတျော တို့ဘဝဖွဈတညျမှုကို လေးစားမှာပါတဲ့။
ဒီအရာက လူအမြားစုနဲ့ အကြှမျးတဝငျမဟုတျပါ ဘူး။သိပ်ပံပညာရှငျတှသေတိပွုမိတဲ့ တဈခုခုဖွဈ နနေိုငျပါတယျ။ဒါက CMEs နဲ့လညျး ပတျသကျ နနေိုငျပါတယျ။လလေ့ာမှုတှအေရ ဒါဟာအာကာသယာဉျ မဟုတျပါဘူး။ နေ ပတျလညျ
မှာ ထူးဆနျးတာမြားစှာရှိနပွေီး သိပ်ပံပညာဟာအဲ့ အရာတှကေိုလိုကျမီဖို့ အတျောကွိုးစားရဦးမှာပါ။
သငျကောဒါကိုလကျခံပါသလား။ဂွိုဟျသားတှတေကယျရှိတာကိုကော ယုံပါသလား။သူတို့နနေားမှာပငျ ရပျနားနိုငျတာကိုကော အယုံအကွညျ ရှိရဲ့လား။ ဒါဆို ဒီ အာကာယာဉျတှကေ ဓာတျပုံအတုတှကေောဖွဈမနနေိုငျဘူးလား။ ဘယျသူမှ မသိနိုငျပါဘူး။
ဆေးရုံတင်လိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို ရဲ့ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ 😥 ပြိုင်ပွဲကလည်း နီးလာပြီနော်
“ဘုရားက ကန်မှာ… ငါးလွှတ်ပြီး ကုသိုလ်ယူသူများ …မျက်ရည်ခိုင်ရင်...
​ရေတံခွန်​မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ခြေချော်ပြုတ်ကျမှု နှစ်ဦးလုံး သေဆုံးသွားရှာတဲ့...